प्रदेश नं १ का मुख्य गन्तव्य | tour Khabar
प्रदेश नं १ का मुख्य गन्तव्य
हिमाल पहाड तराई तीनवटै भाग समेटेर बनेको प्रदेश नं. १ को मेचीको तिरदेखि सगरमाथाको आधारशिविरसम्म पुग्दा यहाँ विविध जाति भाषा संस्कृति भेषभुषा भएको मानिस बसोबास गरेको ठाँउ हो । जैविक विविधताले धनी प्रदेश पनि १ नं नै हो ।
विश्वमा दुर्लव मानिएको रेडपाण्डादेखि लिएर संसारमा नपाईने काडे भ्याकुर यही प्रदेशमा पाईन्छ । सवैभन्दा होचो (६५मिटर) स्थान केचना र विश्वको सबभन्दा अल्गो हिमाल (८८४८मिटर) सगरमाथा पनि यही प्रदेशमा पर्दछ ।
गुरासको राजधानी, चराहरुको राजधानी, अर्नाको राजधानी यही प्रदेशमा पर्दछ । पर्यटकीय गन्तव्यको हिसावले प्रदेश नं. १ उत्कृष्ट मानिएता पनि उचित व्यवस्थापन र प्रचार प्रसारको अभावले ओझेलमा परेको छ ।
हामीभन्दा कम प्राकृतिक स्रोत साधान र कम पर्यटकीय सम्भवावना भएका पश्चिमी जिल्लाहरु पूर्व भन्दा राम्रो विकसित भएका छन् । हामी हाम्रो श्रोत र साधनलाई उपयोग गरेर ब्राण्ड बेच्न नसक्दा यहाँको पर्यटन प्रवद्धन हुन सकेको छैन् ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ‘के नेपाल सानो छ ?’ भन्ने निबन्धमा भनेका छन्, भौगोलिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधता एकै साथ हेर्न विश्वमा धेरै देशको भ्रमण गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा आए यो सानो क्षेत्रफलभित्र सिनेमाको पर्दामा पूरै जीवन हेरेजस्तै सारा विश्व नै देख्न पाइन्छ, पहाडको एक पाटामा घाम लागिरहेको हुन्छ, अर्को पाटोमा पानी परिरहेको हुन्छ र अलि पर हिउँ परिरहेको हुन्छ यो दृश्य नेपालमा एकै साथ देख्न पाइन्छ, यस्तो दृश्य विश्वका कुनै पनि देशमा एकैसाथ देख्न पाइँदैन, भूगोलको सीमालाई छाडेर हेर नेपाल कसरी सानो भयो ?
देवकोटाले भने झै पहाडको एक पाटामा घाम लागिरहेको दृष्य, अर्को पाटोमा पानी परिरहेको दृष्य, अलि पर हिउँ परिरहेको दृश्य पूर्वमा पनि एकसाथ देख्न पाइन्छ, यस्तो दृश्य विश्वका कुनै पनि देशमा एकैसाथ देख्न पाईदैन । यस्तो विश्वमा कही नभएको दृष्य, क्षेत्र बेच्न नसक्नु विडम्बना भएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा पाउरोटी टोकेर छाक टार्ने र थोरै खर्चमा अत्यधिक समय नेपालमा विताउन खोज्ने पर्यटकको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । ति पर्यटकहरुलाई प्रदेश नं १ का पर्यटकीय क्षेत्र घुमाउन ल्याउन पहलकदमी गरिनुपर्दछ ।
सेताम्मे हिउ फुल्ने कंचनजंघा र मकालु हिमालको काखमा लमतन्न परेको धनकुटा बजार र दक्षिणमा चारकोशे झाडी मास्दै फैलिएको सुन्दर नगर धरानलाई हेरेर बसेको पर्यटनग्राम भेडेटार पुर्वको पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ ।
आकर्षणको केन्द्रविन्दु मानिएको पर्यटन ग्राम भेडेटारमा बाह्रैमास आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको भिड हुने गरेको छ । आदी भुभाग धरान र आदी धनकुटाको स्वामित्वमा रहेको भेडेटार आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको आकर्षकको केन्द्र विन्दु बन्दै आएको छ ।
पहाडी श्रृखला मकालु मनास्लु ल्होत्से र कुम्भकर्ण हिमालको दृश्यलोकन धनकुटा बजारको आकर्षण एवं सेउती र सर्दुको वीचमा रहेको धरानको मनमोहक दृष्य अवलोकन गर्न भेडेटार चढ्नेहरुको संख्या पनि दिन दिनै बढेको छ ।
समुन्द्र सतहदेखि एक हजार ४ सय ३० मिटरको उचाईमा अवस्थित भेडेटार धरानदेखि १६ किमी उत्तर धनकुटादेखि ३२ किमी दक्षिणको सुनसरी र धनकुटाको संगमस्थलको रुपमा रहेको छ । एकैछिनमा चर्को घाम लाग्नु र एकैछिनमा कुहिरोले ढाक्नु भेडेटारको विशेषता हो ।
छिनछिनको मौसम परिवर्तन पनि पर्यटकका लागि आकर्षक थप्ने अर्को विषय भएको स्थानीय होटल व्यवसायी जितेन्द्र रुम्दाली बताउछन् ।
यहाँ ३० फिट अग्लो टावर बनाइएको छ । यही टावर पर्यटकहरुको आकर्षणको केन्द्र विन्दु बनेको छ । जहाँ हजारौ पर्यटकहरु चढ्न तछाडमछाड गर्ने गर्छन् । उक्त टावरबाट धरान धनकुटा सप्तकोशीको फाँट चारकोसे झाडी एंव तराईका मनमोहक फाट धित मरुन्जेल अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
भ्युटावरबाट विहानीपख देखिने दृष्य कैद गर्न प्रकृती प्रेमीहरुको तछाडमछाड हुने गरेको छ । सिजनको बेला टावरबाट दृष्य अवलोकन गर्न दैनिक हजारौ पर्यटकहरु आउने गरेका छन् ।
सो टावरमा प्रवेश गर्न प्रतिव्यक्ति ५ रुपैया र क्यामेरा सहित प्रबेस गर्दा १० रुपैया शुल्क लिने गरिएको छ । भने भारतबाट आउनेलाई २ रुपैया र अन्य मुलुकबाट आउनेलाई ५० रुपैया शुल्क निर्धारण गरिएको छ । हाल सो टावर चढ्नेहरुको संख्या बढेको छ । दैनिक ७ हजार भन्दा बढि शुल्क संकलन हुने गरेको छ ।
कार्तिकदेखि बैशाखसम्म पिकनिक खान पूर्व काकडिभट्टा पश्चिम जनकपुरसम्मका आगन्तुकहरु भेडेटार चढ्ने गरेका छन् । भेडेटार देखि पश्चिममा रहेको सागुरी गढी, उत्तरमा २ किमी तल रहेको नमस्ते झर्ना राजारानी नाम्जे बजार एसियामै सव भन्दा ठूलो बरको रुखलगायत भेडेटार आसपासमा अवस्थित छन ।
यी ऐतिहासीक धार्मिक महत्वका बस्तुले पर्यटकहरुलाई आकृषित पारेका छन । विशेष गर्मी मौसममा शितलता भर्न र चैत्र बैशाखमा गुराँस फुलेको दृष्यावलोकन गर्न पर्यटकहरु झुम्मिने गर्छन् । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुको चाप वर्षै्पिच्छे बढ्न थालेपछि पूर्वको आकर्षक पर्यटन स्थल भएको प्रमाणित समेत भएको छ । सरकारले समेत यो स्थललाई राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्र भनेर घोषाणा गरेको छ ।
कतिलाई थाहा नहुन सक्छ-धनकुटाको नाम्जे गाउँ सिएनएनले गरेको सर्वेक्षणमा विश्वकै १२औं उत्कृष्टमध्ये आठौं उत्कृष्ट गन्तव्यको सुचीमा सुचीकृत छ । त्यही गाउँ अहिले दिनहुँ फेरिने क्रममा छ ।
त्यस ठाउँको चर्चा बढेसँगै अहिले टाढा–टाढाबाट त्यहाँसम्म पर्यटक जान थालेका छन् । साबिक भेडेटार गाविसको वडा नम्बर ७ मा पर्ने नाम्जे भेडेटारबाट मात्रै दुई किलोमिटरको दुरीमा छ । अहिले त्यहाँ साना होटल, होमस्टे प्रशस्तै खुलेका छन् ।
त्यसबाहेक व्यवस्थित होटल, सरसफाइ, संग्रहालयको भवनसमेत निर्माण भएकाले पर्यटकको लर्को लागिरहेको छ । यहाँ होमस्टे राम्रो फस्टाएको छ । एक रात विताउन र मगरको हुर्रा नाच हेर्न पर्यटकहरु नाम्जेमा बस्ने गरि प्याकेज बनाएर आउने गर्दछन् ।
यहाँको होमस्टेमा २५० देखि ५०० सम्म खर्चले आरामदायी रुममा खान बस्न पाईन्छ । लोकल धानको भात, लोक कुखुराको भाले, अकवरे खोर्सानी, कोदोको तोङ्बामा यहाँको स्पेसल खान्की हुन । साँझमा मगरहरुको हुर्रा नाचले धेरैको मन लोभ्याएको हुन्छ ।
भेडेटारमा धेरै दिन बसेर दृष्यावलोकन गर्न चाहाने पर्यटकहरुका लागि पनि सुविधायुक्त २०।२५ वटा होटल लजहरुको पनि व्यवस्था छ । जाडो मौसममा घुम्न जानेहरुका लागि तातोपानीमा भिजाएको कोदोको तुङमा खाना धेरै पर्यटकहरु रमाउने गर्छन् । प्रायः भेडेटार घुम्न जानेहरु कोदोको तुङमा र रागाको सुकुटी नचाखी फर्कदैनन् ।
नेपालीपन रुचाउनेहरुका लागि यहाँ गुन्द्रुक सिन्की लगायतका परिकार समेत पाइने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यहा विदेशी पर्यटकहरुका लागि इण्डीयन र चाईनिज डिस पनि तयार हुने गरेको छ । सुविधायुक्त होटलहरु प्रसस्त खुलेकाले पर्यटकहरुलाई खाना बस्न सहज बनाएको छ । यहाँ पहाडी क्षेत्रमा फलेका ताजा फलफुल तथा तरकारी पनि पाईन्छ ।
भेडेटार पुग्न काठमाण्डौंदेखि हवाईजहाजबाट बिराटनगर ओर्लिए पछि ट्याक्सीमा करिव ५५ किमी दुरी यात्रा गरे पछि पुग्न सकिन्छ । दिवा वा रात्री सेवाबाट काडमाण्डौबाट सिधै धरानमा उत्रिएर भानुचौकबाट रिजर्वका ट्याक्सीमा चढेर भेडेटार पुग्न सकिन्छ ।
भेडेटार जानका लागि धरानमा प्रशस्त रिजर्व ट्याक्सीहरु पनि पाइन्छन् । ट्याक्सी रिर्जव गर्न समस्या भए धरानको भानुचौक पुर्वपटि धरानबाट राजारानी तेह्रथुम भोजपुर खादबारी बसन्तपुर पाख्रिवास लगायत ठाउँमा जाने प्रसस्त सार्वजनिक बसहरु पाईन्छन ।
ती बसमा प्रतिव्यक्ति ५० रुपैया तिरे पछि भेडेटार सम्मको यात्रा गर्न सकिन्छ । धरानबाट आजभोली अटोरिक्साहरुले पनि भेडेटारसम्मको सेवा दिने गरेका छन् । भेडेटारबाट २ किमी पूर्व नाम्जेर २ किमी उत्तरको ओरालो झेर पछि नमस्ते झरना पुन सकिन्छ । अटो वा ट्याक्सीलाई यहाँ पुग्न केही थप रकम दिनुपर्ने हुन्छ ।
हलेसी धाम हिन्दु, बौद्धमार्गी र किरातीको साझा तीर्थ स्थल हो । हिन्दुका भगवान् शिव, बौद्धमार्गीका गुरु पद्मसंभव र किराती पुर्खा रैछाकुलेसँग सम्बन्धित ठाउँ हो, जुन खोटाङको महादेवस्थान–४ मा पर्दछ । यहाँ दर्शन गर्नाले दुःखबाट मुक्ति, पदोन्नति, खडेरीबाट मुक्ति, सन्तान लाभ र निरोगी हुने जनविश्वास रहेको छ । यहाँ गुफामा धर्मद्वार, जन्मद्वार र पापद्वार छन् । गुफाका मूर्तिलाई धर्मअनुसार फरक–फरक नाउँले पुजिन्छ ।
दुइवटा ठुला गुफा छन् । हलेसी गुफा पहरामा छ । गुफामा महादेव बास भएको हिन्दु किमदन्ती रहेको छ । गुफाभित्र थरीथरीका मूर्ति, शिवलिंग, गणेश, कुमार र पार्वती र, चमेरा रहेका छन् ।
स्थानीयका अनुसार किरातीका पुर्खा रैछाकुलेले गुफा पत्ता लगाएको बताईन्छ । उनीहरू हलेसीलाई पितृ मान्छन् । हलेसीमाथिको तुवाचुङ डाँडा छ । यो अत्यन्त रमणीय छ ।
हलेसी गुफा पश्चिमपट्टि बसाहा गुफा छ । त्यसको पल्लोछेउमा पुगेर हेर्दा माथि आकाश खुला देखिन्छ । गुफा भएको पर्वतलाई बौद्धमार्गी अवलोकितेश्वर पर्वत मान्छन् । बसाहा अघिल्तिरको बज्रपाणी र उत्तरपट्टिको मञ्जुश्री पर्वत, डाँडा ध्वजापताकाले रंगीन रहेको छ ।
गुफामा बुद्धपूर्णिमा, लोसार, शिवरात्रि, रामनवमी, बालाचतुर्दशी, तीज, उभौली र उधौलीमा मेला लाग्ने गर्दछ ।
हलेसीमा नेपाली सामान्यत एक रात बस्छन् । त्यहाँ मध्यम खालका होटल छन् । पानीको समस्या भएको स्थानियले बताएका छन । होटल रोयल, डुङदेलो रिसोर्ट, शिवदर्शन गेस्ट हाउस, अनिता होटल, जगत होटल, हरि राई होटल, बस्नेत होटल आदि राम्रा मानिन्छन् ।
गुफा नजिकैसम्म सवारीहरु जान्छन् । हलेसीसम्म बाटो पक्की छैन । घुर्मी तरेपछि उदयपुर र ओखलढुंगा जोड्न सुनकोसी र दूधकोशीको जयरामघटमा पक्की पुल छैन । बर्खा सकिएपछि अस्थायी पुल हालिन्छ ।
काठमाडौंदेखि बनेपा–बर्दिबास सडकको खुर्कोट खण्डबाट मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै घुर्मीबाट हलेसी पुग्न २१६ किमि छ । काठमाडौंको चाबहिल र कोटेश्वरबाट जीप छुट्छन् । जीपमा १० घन्टा लाग्छ ।
सामान्य खर्च गर्दा करिव छ हजार रुपैयाँ बोक्यो भने बसभाडा र दुई रात हलेसीमा बस्न पुग्छ । फर्कंदा मस्याङ, भट्मास, खुर्सानी, बदाम, गुन्द्रुक र मास कोसेली ल्याउन पाईन्छ । यहाँको मौसम अलिक जाडो हुने भएकाले जाडोका लुगा बोक्नु उपयुक्त हुन्छ ।
गुराँसको राजधानीः टीएमजे पदमार्ग
काठमाण्डौबाट धरान, धनकुटा, बसन्तपुरसम्मको मोटर यात्रा पछि टुटेदेउराली देखि पैदल यात्रा शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ । शेर्पा, भोटे, तोप्केगोला, डोक्पो, थुदामे, लिम्बु, तामाङ, जातीको परम्परा। संस्कृति, भेषभूष, रहनसहन पनि मुख्य हो । काठमाण्डौबाट जहाजमा विराटनगर झरेर धरान हुदै पुग्न सकिन्छ ।
देशभर इलामको चर्चा हुने गर्दछ । इलामे चिया, अदुवा, अम्रिसो, ओलन (दूध), अकबरे उत्पादनले यहाँ पर्यटकहरुलाई तानेको छ । पछिल्लो समय इलाम एग्रो टुरिज्म गन्तव्य बन्दै छ ।
नेपालको पहिलो चिया बगान इलामकोकन्याममा छ । स्थानियका अनुसार सदरमुकाममा बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले विसं १९२० मा चिया रोपेका थिए । त्यो बेला ११८ हेक्टरमा रोकिएको थियो । हाल भने ५५ हजार हेक्टरमा चिया बगान रहेको छ । यहाँ विसं १९३५ मै चिया प्रशोधन कारखाना खोलिएको थियो ।
इलाममा बहुभाषा धर्म सस्कृतिले भरीपूर्ण छ । यहाँको होटल एसोसिएसनले ‘इलाम घुमौं जीवनभर रमाऔं’ भन्ने नारा बनाएर पर्यटकीय प्रवद्धन अभियान संचालन गरेको छ । इलामका माइपोखरी, सन्दकपुर, कन्याम, अन्तुडाँडा, छिन्टापु, मिकलाजोङ, टोड्के झरना, माङमालुङ, सिद्धिथुम्का, गजुरमुखी, माइखोला, पाथिभरा, मंगलबारे महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र हुन । इलाम आउदा यि क्षेत्रमा नपुग्ने हो भने यात्रा अधुरो रहन्छ ।
यहाँ सदरमुकाममा भ्यु–टावर, भालुढुंगा, चुरेघाँटी गुम्बा, नारायणस्थान, माइस्थान, भीमसेनस्थान, चिया कारखाना, क्याम्पस, सिंहवाहिनी र सेतीदेवी मन्दिरलगायत पर्यटकीय सम्पदा रहेका छन् ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गको चारआलीबाट पसेपछि कन्याम पुगिन्छ । त्यहाँ चियाबारीले पर्यटकहरुको स्वागत गर्दछ । बगानबीचमा नागबेली सडकको दृष्य निकै लोभलाग्दो देखिन्छ । बगानलाई कुहिरोले ढाकिरहन्छ । चैतदेखि मंसिरसम्म चियाको मुना टिप्ने समय हो ।
इलामको अग्लो डाँडो सन्दकपुर (३,६३६ मिटर)। ल्यान्डरोभर चढेर जान सकिन्छ । दाजिलिङ र इलामको सीमावर्ती सन्दकपुरमा होटल छन् । त्यहाँबाट कुम्भकर्ण, कञ्जनजंघालगायत दर्जनौं हिमाल अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
फिक्कलमा लोपोन्मुख लेप्चा जातिको बसोबास रहेको छ । लोपोन्मुख लाप्चा करिब ४५ सयको संख्यामा रहेका छन्। फिक्कलमा प्रेमबहादुर लेप्चा संग्रहालय नै संचालन गरेका छन् ।
कहलिएको अर्को गन्तव्य अन्तुडाँडा हो । फिक्कलबाट १५ किमिको डाँडा (१,८२३ मिटर) बाट सूर्योदयरसूर्यास्त देखिन्छ । असोजदेखि घुम्न रमाइलो हुन्छ। गाउँमा होमस्टे सुविधा छ ।
फिक्कलबाट ३५ किलोमिटरमा इलाम बजार पुगिन्छ । त्यहाँबाट १० किलोमिटरमा पशुपतिनगर पुगिन्छ । यो दाजिेलिङ प्रवेशद्वार पनि हो ।
धेरै व्यक्तिहरु २/४ वटा फिकलमा फोटो खिचेर इलाम घुमेको भनी फर्कन्छन् । फिक्कल पुगे पछि इलाम पुगेकै राम्रो । मेची राजमार्गको कोलबुङ–२ कुटिडाँडामा पाथिभरा मन्दिर छ । यो ताप्लेजुङकी बहिनी भन्ने गरिन्छ ।
यहाँ घुम्न र दुई रातसम्म इलाममा बस्न करिव ८ हजार भए पुग्छ । बम्बैसन, ललिपप, छुर्पी, चीज, चिया, अकबरे खुर्सानी, आलु आदि यहाँका कोसेली हुन । देशविदेशमा यि चिजहरु निर्यात हुने गर्दछन् ।
विर्तामोर्डदेखि ४ किमी पूर्व चारआलीबाट उत्तर लागे पछि करिव २ घण्टामा इलाम पुगिन्छ । काठमाडौंको कोटेश्वरबाट ६९० किमिमा इलाम बजार पुगिन्छ । कोटेश्वरबाट दिउँसो ३ बजेतिर बस छुट्छन् । १४ घन्टाको यात्रा पछि इलामलाई चुम्ने सकिन्छ । काठमाण्डौ–विराटनगर हवाई यात्रा गरि विराटनगरबाट इलाम जाने बस सामातेर पनि इलाम पुग्न सकिन्छ ।
प्रदेश नं १ को प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभरा ताप्लेजुङमा पर्दछ । अन्न भरिएको पाथीजस्तो देखिने ताप्लेजुङको डाँडालाई पाथिभरा (३,७९४ मिटर) का नाउँले चिनिएको छ । त्यहाँबाट कुम्भकर्ण, कञ्चनजंघा हिमशृंखलाको दृष्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यो क्षेत्र लिम्बुहरुको बहुल्यता भएको क्षेत्र हो । कुम्भकर्णलाई लिम्बूहरू फक्ताङलुङ भन्छन् ।